सरकारबाट इजाजत नलिएका अबैध टिभी च्यानल प्रधानमन्त्री देउवाले किन उद्घाटन गरे ? || विचार
सरकारबाट इजाजत नलिएका अबैध टिभी च्यानल प...
सरकारबाट इजाजत नलिएका अबैध टिभी च्यानल प्रधानमन्त्री देउवाले किन उद्घाटन गरे ?
access_time 21 Nov 2021
देशका प्रधानमंत्रीले नै गैरकानूनी संस्थालाई बैधताको ख्यालै नगरी प्रबर्धन गर्न मतियार बन्ने काम गर्छन् भने अरुबाट अबैध काम गर्नेहरुमाथि कार्वाही आशा कसरी गर्ने ? हाम्रो देशका प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले हिजो शुक्रबार उद्घाटन गरेका दुई टीभी च्यानलले नेपाल सरकारबाट प्रसारणका लागि इजाजतपत्र नै नपाएको खुलेको छ।
पतञ्जली नेपालले सञ्चालनमा ल्याएका दुई टीभी च्यानल—आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपालको उद्घाटन प्रधानमन्त्री देउवाले मण्डिखाटारस्थित पतञ्जली आश्रममा गरेका थिए।यो काम निकै बिबादित बनेको छ ।
नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणका लागि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजत दिने गर्छ। विभाग स्रोतका अनुसार पतञ्जलीले टीभी च्यानल प्रसारणका लागि इजाजतपत्र नलिएको बुझिएको छ । यी टीभीले योगसाधना, योगाभ्यास र धार्मिक गतिविधिबारे सामग्री प्रसारण गर्ने जनाईएको छ ।
पतञ्जली आश्रममा आयोजित टीभी च्यानल उद्घाटन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालदेखि जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र नीधि, कृष्ण सिटौला, चित्रलेखा यादव र सुजाता कोइरालासम्म जम्मा भएका थिए।
बिहान ९ बजे सुरु भएको कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु बालकृष्ण खाण र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पनि सहभागी भए। नेताहरु पतञ्जलीका योगगुरु रामदेव तथा अर्का अभियन्ता आचार्य बालकृष्णको निम्तो स्वीकार्दै त्यहाँ भेला भएका थिए। भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि सोही मञ्चमा सहभागी थिए। कार्यक्रम देख्दा यस्तो लाग्थ्यो– नेपालको कुनै राष्ट्रियस्तरको टीभी उद्घाटन भइरहेछ।
रामदेव आफैँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई बिहीबारै भेटेर कार्यक्रममा जसरी पनि आइदिन आग्रह गरेका थिए।एमालेका अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ कार्यक्रममा गएनन्। निम्ता पाए पनि ओलीले आफू अस्वस्थ रहेको जानकारी गराएको थाहा भएको छ । निकै तामझाम सहित उद्घाटन गरिएका यी टीभी च्यानल कुन उद्देश्यले ल्याइए भन्ने खुलेको छैन।
भारतको लगानीमा आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामका दुई टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा आएका हुन्। आचार्य बालकृष्ण र रामदेवको लगानी रहेको भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जली आयुर्वेदले नेपालमा टीभी ल्याएको हो। आचार्य बालकृष्ण पतञ्जलीका अध्यक्ष हुन्।
भारतीय मिडियाले भारतीय कम्पनीले नेपालमा आस्था नेपाल र पतञ्जली टीभी ल्याउन लागेको समाचार दिएका छन्। त्यहाँको दि इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकले यी दुई च्यानल सञ्चालनमा दस हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने समाचारमा जनाईएको छ।
पतञ्जलीले भारतमा आयुर्वेदिक सामान, मह, सर्फ, दन्तमञ्जन, आटा, साबुन, घिऊ लगायत अनगिन्ती दैनिक उपभोग्य सामान बिक्री गर्छ। पतञ्जलीलाई भारतीय जनता पार्टीको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग रहेको मानिन्छ। भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय मन्त्री पतञ्जलीका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका हुन्छन्।
योग र धर्मको आवरणमा पतञ्जलीले व्यापार र राजनीति गर्दै आएको छ। भारतमा योग शिविर सञ्चालन गर्ने पतञ्जलीले ​आयुर्वेदिक वस्तुको उत्पादन गरेर बेच्ने गरेको छ।
पतञ्जलीले कोरोना महामारीका बेला कोरोना निको पार्ने भन्दै ल्याएको ‘कोरोनिल’ आयुर्वेदिक औषधि भारतमै विवादित बनेको थियो। जनस्तरबाट विरोध भएपछि भारत सरकारले कोरोनिल औषधि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको थियो। नेपालमा पनि कोरोनिलको व्यापार गर्ने प्रयास पतञ्जलीले गरेको थियो। तर उनीहरुको प्रयास सफल भएको थिएन।
पतञ्जलीले नेपालमा पनि योग शिविर सञ्चालन गर्ने गरेको छ। बारम्बार नेपाल आइरहने रामदेव र आचार्य बालकृष्णले काठमाडौँको टुँडिखेल लगायत स्थानमा योग शिविर चलाउने गरेका छन्।
पतञ्जलीले नेपालमा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापार गर्ने गर्छ। नेपालमा अहिले दुई च्यानल सञ्चालनमा ल्याएर पतञ्जलीले आफ्नो व्यापार प्रबद्र्धन गर्न खोजेको छ ।